Mogadishu Journal » 2020 » November » 20
Death toll at 35 as Israel strike destroys building in Gaza: Live
Video shows Israeli settler trying to take over Palestinian house
Bill and Melinda Gates to divorce after 27 years together
Iran foreign ministry denies US hostage swap imminent
Hospital fire kills 18 in India as 402,000 COVID cases announced
//November 20, 2020
Sheekh Shariif iyo Xasan cali Kheyre oo Muqdisho kulan Xasaasi ah ku yeeshay (Daawo Sawirada)
Muqdisho:-Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo sidoo kale musharax u taagan xilka Madaxweynaha ayaa caawa kulan la qaatay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Kulanka labada masuul ayaa ka dhacay howga uu Muqdisho ka degan yahay...
Shir Muqdisho uga furmaya Musharaxiin badan oo u taagan Xilka Madaxweynaha Somalia
Muqdisho:-Waxaa lagu wadaa in beri Hotelka Jaziira ee Muqdisho ka furmo shir xasaasi ah oo yeelanayaan inta badan Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya, kuwaa oo shirkooda go’aan mideesan uga qaadan doona doorashada dhawaan dalka ka dhaceysa. Musharaxiintan oo...
Ethiopia oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay hub iyo banbaanooyin si sharci darro ah lagu heystay
Addisababa:-Booliska magaalada Addis Ababa ee xarunta Itoobiya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen hub iyo banbaanooyin si sharci daro ah lagu heystay . Baaritaano ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada ayey sheegeen in 113, isugu jira qoryo iyo bistoolado ay ka heleen degmada...
Shirkadaha Diyaaradaha Soomaaliya oo soo dhaweeyay Go’aan kasoo baxay Wasaarada Maaliyadda
Guddiga isutagga shirkadaha diyaaradaha oo soo dhaweeyay Go,aan ka soo baxay Wasaaradda Maalyadda Xukuumada Soomaaliya. Muqdisho:-War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska midawga Diyaaradaha dalka ayaa lagu sheegay in ay tageersanyahiin hanaanka loo maray aruruurinta lacagaha...
Musharax Madaxweyne Kheyre oo ka hadlay nuuca Doorasho ee loo baahan yahay in la qabto
Muqdisho:-Musharax Madaxweyne 2021, Mudane Xasan Cali Khayre oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa cadeeyay inay muhiim tahay in laga shaqeeyo hannaan dalka ay uga dhici karto doorasho la isla oggolyahaya si looga fogaado qalalaase siyaasadeed iyo mid amni.Khayre oo dadweyne...
Ka soo kabashada Virgil van Dijk ee dhaawaca ACL
Daafaca dhexe ee Liverpool Virgil van Dijk ayaa durbaba dib u bilaabay tababarka fudud ka dib dhaawicii ACL ee bishii hore, taasoo sare u qaaday suurtogalnimada uu ninka reer Holland u dhameystiri karo soo laabashadiisa isla markaana uu ku soo laaban karo garoonka Reds ka hor...
President-elect’s victory in Georgia marks the first time a Democratic presidential contender has won the state since 1992. 20 Nov 2020 United States President-elect Joe Biden has officially been declared the winner in the state of Georgia, flipping the historically...
Azerbaijan’s military takes over one of three districts Armenia agreed to give back in the contested region as part of a peace deal. 20 Nov 2020|Updated: 42 minutes ago Azerbaijan’s army says it has entered the district of Aghdam, the first of three to be handed back by...
Musharax Madaxweyne Xasan Kheyre oo si Weyn loogu soo dhaweeyay Muqdisho (Sawirro)
Muqdisho:-Waxaa goordhaw garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kasoo degay Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre sidoo kale ah Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya. Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde waxaa Musharax Xasan...
Faahfaahin: TPLF oo mar kale Gantaallo ku garaacday xarunta gobolka..
Sida ay ku warrantay warbaahinta Itoobiya Gantaallo ayaa xalay lagu garaacay caasimadda gobolka Amxaarada ee Bahirdar xilli uu dagaal ka socda gobolka Tigray, Waa markii labaad oo gantaallo lala beegsado Bahirdar tan iyo markii labo toddobaad ka hor ay dagaallada ka qarxeen...
Muxuu Tedros Adhanom kaga jawaabay eedeyntii kaga timid dowlada Itoobiya?
Madaxa Ha’yadda Caafimaadka Adduunka Dr. Tedros Adhanom ayaa beeniyay eedeymo uu u jeediyay taliyaha guud ee ciidamada militeriga Itoobiya kaasoo sheegay inuu TPLF ka caawiyay hubka ay kula dagaalamayaan ciidamada Itoobiya. “Waxaa jiray warar sheegayo in aan dhinac taageerayo, ma...
Xasan Sheekh oo go’aan ka qaatay doorashada
Muqdisho:-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u hadlay markii ugu horreysay tan iyo markii la soo magacaabay guddiyada doorashada ee heer federaal iyo dowlad gobaleed. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo wareysi siiyey idaacadda Kulmiye ee...
(Sawiro) Diyaar garow lagu soo dhoweynayo Musharax Khayre oo ka socota Muqdisho
Muqdisho:-Diyaar-garow ballaaran oo lagu soo dhoweynayo RW hore ee Somalia Xassan Cali Khayre ahna musharax u taagan doorashada Madaxweynaha Somalia ayaa laga dareemayaa saaka Muqdisho qeybo ka mid ah. Dadweyne fara badan oo wata sawirada Khayre iyo boorar kala duwan ayaa ku...